Xa umfana umfazi ngu ehleli ngendlela rock nge indebe ikofu, dancing kwi club okanye phakathi iintanga, nto distinguishes kwayo ukususela childless competitors. Awuyi siyazi ukuba ufuna ndihamba ukuqala dating a kubekho inkqubela kunye umntwana. Yena lugqiba nje ukuvumela herself ukuba kuphumla a iiyure ezimbalwa. Nangona kunjalo, umfanekiso free umfazi ukuba yena ngoku sele, deceptive. Ukuba yena mentions yakhe abantwana kwi-incoko, umntu lowo libonise inzala yayo, utshintsho phambili yakhe: yena uba ubhideke okanye nkqu panics. Abanye kubo, bathi, ngoko nangoko sebenzisa kude, ngeli lixa abanye kuqhubeka flirt kodwa yaphula ngaphandle udibaniso ngokukhawuleza njengokuba ukukhanya affair uqalisa jika kwi ezinzima budlelwane.
Kululuvo ukumona? Kululuvo uloyiko uxanduva? Okanye mhlawumbi isizathu breakup ngu yayo unduly phezulu okulindelweyo. Rhoqo umntu amagqabi umfazi kunye kid ngokuba nguye koyika, kwaye akanako okanye akubonakali t ufuna admit ukuba nkqu ukuya ngokwakhe. Oku kwenzeka, njengokuba umthetho, kunye abo musa t kuba kwezabo abantwana: baye ayoyika ka-xanduva malunga oko andazi nto kwaphela. Baya ayoyika ukuba baya uya kubandezelwa ilungelo lakhe zabo personal inkululeko ngenxa umntwana kwaye ukuba abasayi kukwazi ukuseka uqhagamshelane kunye kancinci umntu. Umntu ufumana puzzled yi-imibuzo, ndiza kuba iqabane lakho dating umfazi kunye umntwana, Yintoni indima unikezelwa kum ukuba budlelwane bethu uyaqhubeka. Ezinjalo fears, doubts, kwaye imibuzo phakama na ngaphandle kwesizathu. Ingaba ufuna umhla umfazi kunye umntwana? Enyanisweni, enokwenzeka iqabane lakho sele nzima ixesha ngenxa yokuba yena ajongene nomdla unxulumano phakathi umama kwaye umntwana. Lowo kufuneka, ngaphandle kakubi echaphazela le union, ukugcina i-personal ubudlelwane kunye umfazi, ngexesha elinye, azame ukuze kuphunyezwe ukuthandwa wakhe umntwana, ngamanye amazwi, ukwakha kakuhle yakhe ubudlelwane kunye. Inzala kwi-umfazi ukukhulisa umntwana independently ubeka inani yemiba ngaphandle isombulula oko kunzima ukwakha na budlelwane nabanye. Oko kumele a guy kwenza ukuba lowo ngenene likes hayi nje kuphela kubekho inkqubela kodwa kubekho inkqubela kunye umntwana. Ingaba ufuna umhla a kubekho inkqubela kunye umntwana? Intliziyo yakho ngu captivated nge ubuhle kwaye ngoko ufuna ukufumana phandle ukuba elandelayo, kuye kukho kancinci kid. Yintoni kufuneka wenze? Kufuneka uqale i-ubudlelwane kunye kubekho inkqubela othe umntwana, okanye unike kwi ukuba kwazi bani, enxulumene ne fomati. Emva zonke, baninzi girls abakhoyo hayi burdened yi-enjalo uxanduva. Uvumelekile ukuba embarrassed hayi kuphela yi-personal unpreparedness ukuba uxanduva idibene ne-sele ezikhoyo encinane-usapho kodwa kanjalo yi-eyokuba yakho engalindelekanga inkangeleko, mhlawumbi, asiyiyo enqwenelekayo. Ukongeza, abahlobo bakho kwaye relatives discourage nani lonke ixesha. Ngaxeshanye, ube sele fallen ngothando kunye yakhe kwaye wena musa t ufuna ukunika phezulu ngoko ke ngokulula. Amadoda musa t njenge abantwana kakhulu, musa t kufuneka i-uhlalutyo lomgaqo-pros kwaye cons, dating a kubekho inkqubela kunye umntwana. Ezinjalo abantu musa t rhoqo uthando kwezabo abantwana, abakho rhoqo ukwazi ukwamkela, fondle kwaye abaphakamise, ngoko ke yamkelwa abantwana akunjalo, kufuneka ngalo lonke. Nangona kunjalo, unoxanduva umntu akayi kuba puzzled ngoko ke kakhulu nge yokuba yena likes a kubekho inkqubela kunye umntwana kodwa kunye njani kuziphatha abayo kwaye yakhe kid. Omnye moms ingaba brides kunye ezikhethekileyo ulwazi nkqubo. Ingaba ufuna umhla a kubekho inkqubela kunye umntwana? Ngokunxulumene psychoanalysts (bona ibonakalisa uluvo i-impartial nakanye), uninzi omnye moms ingaba characterized nge contradictory misela lwezakhono kwaye umnqweno, omkhulu inxalenye oko kusenokuba ngokukhuselekileyo yongezelela uluhlu indisputable merits. Xa ubona i-amazing kubekho inkqubela, awukwazi sazi nokuba awuqinisekanga ke umhla a kubekho inkqubela kunye umntwana okanye nje sexy umfazi. Nakuba kunjalo, kufuneka enze iinzame ukuzoba yakhe ingqalelo. Umfazi kunye umntwana hayi nje mom kodwa kanjalo kubekho inkqubela amaphupha abo malunga nyulu uthando. Ngokuqinisekileyo, yena akayi kunixelela zonke yakhe secrets ukususela kakhulu ekuqaleni kwaye yena uya hardly uyixelelwe yakhe abantwana kuqala, kufuneka ukuphumelela intliziyo yakhe. Yena ufuna ukwazi ukuba ufuna ngokwenene anomdla yakhe kwaye ukuba ufuna iselwa reliable ezinzima ukuhlangabezana umntwana wakhe. Ukuba ucinga dating umntu kunye umntwana, kufuneka uzimisele ukuba babelane uxanduva.
Okokuqala, kufuneka baqonde ukuba umfazi wakho ingaba mkhulu ukukhulisa umntwana wakhe herself. Ucinga ukuba yena ngu mna-abakhethiweyo kwaye ekunene, kodwa awukwazi ukufunda yakhe iingcinga kwaye wena musa t nokwazi malunga enkulu inani ezahluka-mngeni ukuba yena ajongene nayo yonke imihla. Yena ifuna inkxaso kwaye ixesha kuba herself. Ukuba ufuna umhla a kubekho inkqubela kunye umntwana kwaye uthando lwakhe, ube nomonde kwaye uza kubona ubufazi kubekho inkqubela ngasemva a isigqumathelo ye-iron elonyuliweyo. Indlela umhla a kubekho inkqubela kunye umntwana. Njengoko naliphi na umfazi, enye mom ufuna ukuqhuba kude kwayo everyday ubomi kwaye babe nje beautiful umfazi ngubani wamanzi acociweyo na princess. Yena uza kuthatha uhambo ngomsebenzi oluya iinzame ukujonga gorgeous kwaye ngumnqweno, nangona kunjalo, yena urhoxise nkqu ibaluleke kakhulu umhla. Ngamanye amaxesha ebomini ayikho predictable, ingakumbi, ukuba ngaba ingaba abantwana ngubani onako kuwa ill okanye ukufumana kwi-trouble. Xa uqinisekile ukuba ndihamba ukuqala dating umntu kunye umntwana, thatha yonke into lula kwaye ube nengqiqo. Kufuneka usoloko khumbula ukuba umfazi wakho ufumana ndalinda ngomoya wakhe kid ekhaya, ngoko ke, idla, yena akanako afford na engalindelekanga izigqibo. Ukuba unomdla enye kunye umntwana dating, kufuneka sazi ukuba yena usoloko ezama ukugcina yonke into phantsi ebonakalayo okanye engabonakaliyo ulawulo. Njenge Ngoku, yena kufuneka kuza emva ekhaya yi-misela ixesha kwaye akukho excuses ingaba owamkelekileyo. Bonke abantwana kufuneka maternal ingqalelo, kufuneka nje khumbula ukuba ingxelo. Khumbula ukuba passionate hugs kwaye kisses kwi-phambili abantwana ingaba eyona unye. Abantwana kakhulu impressionable nangaliphi na ubudala, ngoko ke ukuba baba iqhotyoshelwe kuwe kwaye yakho kubudlelwane kunye zabo mom akubonakali t yokugqibela elide, banako bazive usamuel kwaye kuba offended. Wonke olungileyo mom uqwalasela umntwana wakhe ukuba abe engundoqo kwaye ibaluleke kakhulu ukubaluleka yayo ubomi, kufuneka nje ufuna ukwamkela oku kunjalo kwaye musa t nkqu zama ukuba compete nge kid, musa t ikhangeleka awkward. Omnye worse izinto ungayenza ukuba kuyinikela ingcebiso okanye nkqu ukufundisa yakhe njani nyusa wakhe nabantwana, ingakumbi ukuba wena musa t kuba ezizezenu. Kufuneka wambi a pediatrician okanye famous kindergarten utitshala ukuya kuxelela yakhe malunga okuninzi abanye innovative iindlela educating abantwana. Ukuba ufuna ukuzisa phezulu kwayo abantwana, kufuneka kuba reliable inxalenye yayo usapho. Ukuba ufuna ibonakalisa kwi njani umhla a kubekho inkqubela kunye umntwana, kulungiselelwa ukuba ngamanye amaxesha uza kuhamba kumhla kunye kunye ngenxa yokuba yena akayi kuba nabani na ukushiya nabo. Njengaye nawuphi na omnye umfazi, yena ingaba ukhetha yokuchitha ukuba umhla ngendlela ekhethekileyo ndlela, nangona kunjalo, yena kufuneka usoloko thatha ingqalelo yakhe nabantwana. Nje yamkela ukuba baze bagcine unpleasant uvakalelo kwi ukuba isiganeko ukuze ngokwakho. Ubukhe musa t ngolohlobo unye kwaphela, animelanga ukuba uyala yakhe kwaye nje yamkela ukuba njengoko naliphi na trifle. Abanye abantu yaphula phezulu hayi kuphela kunye umfazi kodwa kanjalo kunye nabantwana nje eshiya usapho, kwaye i-abantwana andazi uyise wabo ukuba ngokwenene ngcono kuba umntu omtsha. Nonetheless, abantu abaninzi kuqhubeka zithungelana kunye zabo kwaye abantwana babo ex-abafazi ngokunjalo. Kufuneka ukhumbule ukuba baye kwenza ukuba kuphela kuba abantwana kwaye inzuzo yabo, ngoko ke musa t kuba onomona. Wonke omnye mom akubonakali t dlala ezahlukeneyo imidlalo kwaye akubonakali t ufuna ukujonga mysterious. Siyazi into yokuba ufuna kuba uqinisekile ukuba neminqweno yakho thelekisa, uza kwenza emangalisayo nowomeleleyo union. Uyakwazi silindele ukufumana kuphela enyanisekileyo attitude ngakuni ngokunjalo yena ilindele honesty ukusuka yakho icala. Abaninzi omnye moms kuba sele kokuba unpleasant amava kwixesha elidlulileyo, abayenzileyo info rich kwaye ingaba ilungile kuba entsha budlelwane nabanye. Ungafumana i-amazing umvuzo wabo ukuba ufaka honest abayo nokuba kwenzeka ntoni. A kubekho inkqubela kunye umntwana uza kuba yakho loyal iqabane lakho kwaye eyona umhlobo ukuba ubonisa ubulumko nomonde. Uyakwazi ukwenza abahlobo kunye umntwana wakhe kwaye kuba ngenene eyobuhlobo kwaye ndonwabe usapho kwixesha elizayo
← Dating Incoko Ngaphandle Yobhaliso
Encounters-Free Dating, Italy Dating Ngesondo Ngesondo Ngesondo Dating Free Ngesondo Incoko Omdala Ngesondo Ads Ngesondo Encounters, Free Abafazi Omdala Free Ngesondo Girls →